Nifanome tanana tamin’izy ireo ny koperativa ao amin’ny zotra rezionaly sy nasionaly nanadio ny teny an-toerana iray manontolo narahin’ny fandrarahana fanafody iadiana amin’ny mikraoba. Nivoitra nandritra izany fa hitohy hatrany ny asa fanadiovana tahaka izao hahafahana mitandro ny fahasalaman’ireo mpandeha mivezivezy eny an-toerana. Ankoatra izay dia nambaran’ny tale jeneralin’ny ATT Atoa Reribaky Jeannot fa ho hentitra izy ireo amin’ny fampiharana ny manifold hahafahana manara-maso ireo mpandeha. Raha sanatria mantsy, hoy izy ka misy olona iray marary ao anaty fiara dia hita avy hatrany ao anatin’ny “manifold” hampiasan’ilay taksibrosy izy ireny hahafahana mitsabo azy haingana sy ireo nanakaiky azy hisorohana ny fifindran’ny aretina. Narahina fanentanana ny koperativa sy ny mpandeha avy hatrany ity hetsika notanterahin’ny ATT ity ka aorian’izao dia hisy avy hatrany ny fampiharana ny sazy ho an’ireo tratra mandika lalàna.